အသေးစားဆန်ကြိတ်ခွဲစက်သည်ဆန်စပါးကိုပြုပြင်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောကိရိယာဖြစ်သည် ဆန်စက်စက်ရုံ စပါးကိုအမျိုးသားအဆင့်ဆန်သို့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်. ဆန်စပါးသည်စက်ထဲသို့ ၀ င်လာပြီးပုံမှန်ဆန်အချို့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်. ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်ကဆန်ဖြူကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည် 10-20 တစ်တန် / တစ်ရက်။ ဤဆန်စက်တွင်အလိုအလျောက်အစာကျွေးသောကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်, သန့်ရှင်းရေးဆန်ခါ, သံ roller စပါး husker, ခွဲနေခြင်းကိုသတိရပါ, စပါးနှင့်အညိုရောင်ဆန်ခွဲခြားမှုအတွက်ဆွဲငင်အား,ဆန်စက်,ကျိုးဆန်အဆင့်အတန်းစက်, လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှု cabinet.this ပြီးပြည့်စုံသောဆန်ကြိတ်ခွဲစက်သည်အထူးဆုံချက်စက်ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဝယ်သူ၏လိုအပ်ချက်အရစက်တစ်ခုတည်းနှင့်စက်ရုံ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။,သေးငယ်တဲ့ဆန်အပြောင်းအလဲနဲ့စက်ရုံ, ဆန်ထောက်ပံ့ရေးစင်တာ,တောင်တန်းဒေသ, လယ်သမားများသာမကကိုယ်ပိုင်လုပ်သားများ။ ဆန်စက်ကြိတ်ခွဲစက်များအသုံးပြုကြသည်3အဆင့်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်မော်တာကိုစွမ်းအားအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဆန်စက်ငယ်လေး၏ထုတ်လုပ်မှုသည် ၈၀၀ မှ ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ် / တစ်နာရီခန့်ရှိသည်။,ဆန်အချိုးအစားနှင့်အတူ, ကျိုးနည်းသောဆန်, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ရန်လွယ်ကူ.
စပါးကုန်ကြမ်းများကိုဆန်အစာကျွေးသည့်ထဲသို့ထည့်ပြီးဆန်ချပ်စက်ထဲသို့ပို့သည်,ကျောက်ကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်သီးခြားရန် ,စပါးဆန်မှအညစ်အကြေးများ။ စပါးဆန်ကိုပို့လိမ့်မည် ဆန်နှံ သန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်. အခွံခံပြီးနောက်, စပါးကျီ, ခွံနှင့်ကြမ်းတမ်းသောဖွဲနုခွဲထုတ်သို့သွားပါ. အဆိုပါဖွဲနုဖွဲနုပန်ကာအားဖြင့်အထဲကစို့သည်. ဆန်နှင့်မပြင်ဆင်ရသေးသည့်အရောအနှောများကိုသီးခြားခွဲထားသည့်ဒုတိယဓာတ်လှေကားဖြင့်စပါးသီးခြားသို့သယ်ဆောင်သွားသည်. ဆန်ကြိတ်ခွဲနေစဉ်, မြင့်မားသောဖိအားပန်ကာကိုဆန်စက်၏အခေါင်းပေါက်မှတဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သုတ်လိမ်းပေးသည်, သောဆန်အပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်, အဆိုပါဖွဲနုပိတ်ဆို့တားဆီး, ဆန်ကိုချောချောမွေ့မွေ့သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းသုံးမျိုးခွဲထားပါသည်: အညိုရောင်ဆန်သည်ကြိတ်ခွဲထားသောဆန်စက်ထဲသို့ဝင်သည်, ဆန်ပြီးသောဆန်သည်ကြိတ်ခွဲစက်မှထွက်သောဆန်မှထွက်လာသောဆန်သည်ဖွဲနုချွေတာသည့်အခန်းထဲသို့ကျသည်။ အခြားအပိုင်းကိုပထမဓာတ်လှေကားဖြင့်ဆန် huller သို့ပြန်သွားသည်. ဆန်ဖြူကြိတ်ခွဲခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။ ကြိတ်ခွဲထားသောဆန်ကိုအဖြူရောင်နှင့်တောက်ပစေရန်အတွက်စွန်းဆီသို့အစာကျွေးပါလိမ့်မည်။ ,ဒီအဆင့်မှာ,အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်ဆန် select.the ပါလိမ့်မယ်အဖြူဆန်အဆင့်အတန်းအဘို့သိုထားလိမ့်မည်။ ဒီပြီးပြည့်စုံသောဆန်ကြိတ်ခွဲလိုင်း၏နောက်ဆုံးခြေလှမ်းအများအားဖြင့်ထုပ်ထည်ထည်ထည် .after ဆန်ဆန်အများအားဖြင့်အသုံးပြု။ ,ဆန်ကိုစျေးကွက်ထဲမှာရောင်းနိုင်ပါတယ်.
1.ဤပေါင်းစပ်ထားသောဆန်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုကြာရှည်ပုံဆန်စပါးနှင့်ဆန်တိုတိုနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်,စပါးည့်သည်. ပြီးပြည့်စုံသောဆန်ကြိတ်ခွဲစက်သည်ဆန်ဖြူရောရောငံပါသောဆန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်သင့်တော်သည်, မြင့်မားသော output ကိုနှုန်းသည်, အနိမ့်ကျိုးနှုန်း.
2.ဒီဆန်စက်ကြိတ်စက်အားလုံးဟာရေပုံးဓာတ်လှေကားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ်, တုန်ခါမှုသန့်စင်, မင်္ဂလာပါ, စပါးခွဲစက်,ဆန်စက်, ဆန်တနျး,အရာလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် Eco-friendly ဖြစ်ပါတယ်.
3.အပြည့်အဝအလိုအလျောက်သေးငယ်တဲ့ဆန်ကြိတ်ခွဲ, လျော့နည်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ, သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်, မြင့်မားသော output ကို, ကျိုးလျော့နည်းဆန်ထုတ်လုပ်မှု, မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်. လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်, ကျနော်တို့အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားချက်ပေး.
4.ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရကျွန်ုပ်တို့သည်သံမဏိကိုယ်ထည်လည်ပတ်မှုပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်ပြားများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်,ဆန်အရောင်စစ်စက်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်.
5.အဓိကကိုယ်ထည်အာမခံ 12 အပိုပစ္စည်းများမှလွဲ။ လ,အားလုံးအပိုပစ္စည်းအရည်အသွေးမြင့်မားပစ္စည်းများဖြင့်လုပ်နေကြသည်, ကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော.
6.ပြည်ပမှာဆန်စက်တွေပြီးအောင်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်, အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဖောက်သည်များထံမှဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသည်, အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ support.Trusted & ရောင်းအားမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးအာမခံ.
ဆန်စက်စက် 1 အစုံ
စပါးခွံ 1 အစုံ
အစေ့ခွဲခြင်းနှင့်ဆန်စက်ပေါင်းစပ်စက် 1 အစုံ
ထွန်းစက် 1 အစုံ
ဆန်အရောင် sorter စက် 1 အစုံ
ဆန်စပါးစက် 1 အစုံ
ဆန်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက် 1 အစုံ
နှစ်ထပ်ဓာတ်လှေကား 1 အစုံ
လူပျိုဓာတ်လှေကား5အစုံ
(ထည်စက် ,အရောင် sorter စက် ,ဆန်ထုပ်ပိုးစက် optional ကိုဖြစ်ပါတယ်)
အသေးစားဆန်ကြိတ်ခွဲစက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter သည်
ရလဒ်:800~ 1000 ကီလိုဂရမ် / ဇ